दूध बिना अन्डा मा प्यानकेकहरू: नुस्खा
तपाईं कसरी दूध बिना अन्डा मा प्यानकेकहरू बनाउन थाह छ? तपाईं एक मिठाई तयार छ भने कहिल्यै, यो चरण नुस्खा द्वारा कदम, हामी एक सानो थप प्रस्तुत हुनेछ। हामी पनि कसरी अन्डा र दूध बिना प्यानकेकहरू बनाउन बारेमा बताउनुहोस्।
यी व्यञ्जनहरु प्रयोग गरेर तपाईं निश्चित परिवार अनुकूल चिया लागि आदर्श हो कि एक धेरै स्वादिष्ट र पौष्टिक उत्पादनहरु प्राप्त हुनेछ।
हामी दूध बिना अन्डा मा प्यानकेकहरू के
केही मानिसहरू थाहा छ, तर दूध बिना गरे, को प्यानकेकहरू दूध पेय आधारमा गरिएको थियो भन्ने नै मिठाई भन्दा कम स्वादिष्ट हुन।
त्यसैले, हामी स्वादिष्ट प्यानकेकहरू तयार गर्न आवश्यक:
मध्यम आकारको चिकन अन्डा -3पीसी;।
चीनी - 1,2 ठूलो चम्मच;
समुद्र नुन - 2/3 सानो चम्चा;
सूर्यमुखी तेल -3ठूलो चम्मच;
चिसो खानेपानी - 600 एमएल;
सेतो पीठो - लगभग 1 कप (तपाईं एक सानो थप वा सानो कम हुन सक्छ);
भोजन सोडा - सानो चम्चा साढे।
Mesim पैनकेक जग
दूध बिना अन्डा मा प्यानकेकहरू चाँडै र सजिलै तयार छ। तपाईं उत्पादन डाटा frying सुरू गर्नु अघि, तपाईं आधार मुछ्नु गर्न आवश्यक छ। यो हल्कासित मार अन्डा लागि, र त्यसपछि खानेपानी को 450 एमएल, चीनी, थप्न अतिरिक्त हालिएको सूर्यमुखी तेल, चमचा सोडा र समुद्र नुन। सबै सामाग्री वर्दी सम्म भड्काए थिए। त्यसपछि तिनीहरूले आटा खन्याउन।
एकदम viscous पैनकेक कुटपिट प्राप्त, यो अलिकति पानी पिउने को रहलपहल थप्दा द्रवीभूत।
खैर, एक चम्चा संग भड्काए गर्न सकिन्छ जग छैन सामान्य हो, तर एक मिक्सर को मद्दतले। त्यसैले तपाईं गांठ बिना वर्दी आटा प्राप्त।
एक कराइ मा भुट्नु प्यानकेकहरू
दूध बिना अन्डा मा प्यानकेकहरू एक मोटी-पर्खालले घेरिएको पैन उपयोग, शास्त्रीय तरिकामा तलना गर्नुपर्छ। कचौरा मा एक सानो तेल (वनस्पति) र त्यसपछि कडा स्टोभ मा गरम खन्याउन। कि पछि, एक सूप करछुल लिन र तिनीहरूलाई homogeneous आटा scoop। त्यसपछि यसको परिपत्र गति एक हट कराइ हालिएको थियो। यस मामला मा भाँडा तुरुन्तै विभिन्न दिशामा ढल्केको।
यो प्रक्रिया पछि, तपाईं राम्रो ठूलो (एक Skillet को आकार) र पातलो पैनकेक प्राप्त छ। Browning लागि तल पक्ष प्रतीक्षा, उत्पादन स्पाटुला उल्टो र केही मिनेट लागि तलना जारी छ।
स्वादिष्ट पैनकेक, एक प्लेट यसको प्रसार र lubricated तातो पकाउने बोसो (घिउ) गरेर। पैन सन्दर्भमा, आटा को अर्को भाग यसलाई मा खन्याउन र एउटै बाटो पकाउन।
तालिकामा प्रस्तुत कसरी र के गर्ने?
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, दूध एकदम वास्तविक हो बिना प्यानकेकहरू पकाउन। सबै वस्तुहरू तला भएपछि, तिनीहरूले तरिकाले एक प्लेट र तातो चिया एक कप साथ परिवारको वर्तमान सदस्य बाहिर राखिएको छन्।
खाना पकाउने स्वादिष्ट प्यानकेकहरू अन्डा बिना
एक स्वादिष्ट र हार्दिक घर प्यानकेकहरू कसरी बनाउने? दूध, अन्डा, पीठो, चिनी - यी क्लासिक उत्पादनहरु को मुख्य सामाग्री छन्। तर सधैं यी सामाग्री तपाईँको फ्रिज पाउन सकिन्छ छैन।
कसरी दूध बिना स्वादिष्ट उत्पादनहरु खाना पकाउनु, हामी माथि भन्नुभयो छ। अब म तिमीलाई अन्डा बिना हार्दिक प्यानकेकहरू बनाउन सक्छ कसरी बारेमा बताउन चाहन्छु। यसो गर्न हामी उत्पादनहरु को निम्न सुइट आवश्यक:
चीनी - 1 ठूलो चम्चा;
न्यानो सारा दूध - 500 एमएल;
सेतो पीठो - लगभग 1 कप (तपाईं एक सानो थप वा कम हुन सक्छ);
सोडा वा पाक पाउडर कोठा - आधा सानो चम्चा।
दूध संग प्यानकेकहरू कसरी बनाउने?3अन्डा क्लासिक उत्पादनहरु को तयारी को लागि आवश्यक। तर, हामी घटक भने बिना मिठाई बनाउन निर्णय गरे। यो उद्देश्य लागि, सम्पूर्ण न्यानो दूध भंग समुद्र नुन र चिनी र सूर्यमुखी तेल मा थपियो र disintegrant थियो (यसलाई quicklime चमचा बेकिंग सोडा प्रयोग गर्न सम्भव छ)।
दूध एक homogeneous ठूलो प्राप्त गर्न, यो बिस्तारै sifted पीठो खन्याउन। यो एक बरु viscous आटा सिर्जना गर्छ। यसबाहेक, यो किनभने अन्डा तरल जग बिना, यो पतला गर्न पैन लीन र रहन सक्छ Cleckley हुँदैन।
रूपमा प्यानकेकहरू मात्र बाक्लो-पर्खालले घेरिएको पैन प्रयोग बनाउन को लागि अघिल्लो नुस्खा मा। यो राम्रो गरम, त्यसपछि अलि तेल (वनस्पति, 25 एमएल) थपिएको छ। त्यसपछि, एक हट पकवान मा एक सानो आटा फैलाउन र समान रूप यसलाई वितरण।
को पैनकेक तल्लो भाग Saute, आफ्नो स्पाटुला फ्लिप र अर्को केही मिनेट पकाउन। दुवै पक्ष हल्कासित उत्पादनहरु browned गर्दा, यो हटाइएको र तेल खाना पकाउन संग lubricated छ। कि पछि, पैन तुरुन्तै बाहिर नै तरिकामा आटा र भुट्नु नयाँ ब्याच राख्नु।
तालिका प्यानकेकहरू सेवा
यो बिना अन्डा Cleckley को प्यानकेकहरू प्रयोग तयार छन् कि ती उत्पादनहरु भन्दा बढी उत्पादन छौं उल्लेख गर्नुपर्छ। कुनै पनि मिठाई संग हुन सक्छ तालिका यस्तो उत्पादनहरु सेवा गर्छन्। तर, सबै भन्दा परिवारमा संग प्यानकेकहरू प्रस्तुत गाढा दूध वा ताजा मह। साथै, परिवारका सदस्यहरू सधैं तातो चिया एक कप सेवा गरे।
एक क्लासिक प्यानकेकहरू बनाउन
परम्परागत कसरी पातलो प्यानकेकहरू? सोडा, दूध, अन्डा, पीठो र पानी - यस्तो उत्पादनहरु को सामाग्री को एक आधारभूत सेट। सही अनुपात तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईं निश्चित धेरै स्वादिष्ट र सन्तुष्ट मिठाई प्राप्त हुनेछ। यो प्रमाणित गर्न, हामी आफूलाई गर्न प्रस्तावित। यो लागि हामीले निम्न घटक आवश्यक:
पानी पिउने - 200 एमएल;
सेतो पीठो - बारे 1.6 कप (तपाईं थप वा कम एक सानो हुन सक्छ);
सोडा वा पाक पाउडर कोठा - 2/3 सानो चम्चा।
तयारी पैनकेक आटा
परम्परागत घर प्यानकेकहरू कसरी? दूध, अन्डा, पीठो र सोडा एकैचोटि मिश्रित, तर एक द्वारा एक छन्। सबै को पहिलो अन्डा लिन र गहिरो कचौरा तिनीहरूलाई तोड्न। यसलाई हल्कासित पिटाई उत्पादन प्लग न्यानो हालिएको छ पुरा दूध, र समुद्र नुन, एक चमचा बेकिंग सोडा र चीनी थप्नुहोस्। को घटक हलचल, तिनीहरूले सूर्यमुखी तेल, र सेतो पीठो फैलियो। viscous आधार मुछ्नु, यो बिस्तारै खानेपानी प्रयोग द्रवीभूत। यी कार्यहरू फलस्वरूप गांठ बिना एकदम कुटपिट छन्।
थप स्वादिष्ट र सूक्ष्म क्लासिक प्यानकेकहरू तयार आधार नजिक ढक्कन र लागि 15-20 मिनेट लागि छुट्याइएको छोड्नुहोस्।
कसरी तलना गर्न?
अघिल्लो दुई व्यञ्जनहरु मा वर्णन रूपमा कराइ मा क्लासिक भुट्नु प्यानकेकहरू ठ्याक्कै एउटै हुनुपर्छ।
उत्पादनहरु दुवै पक्षले browned भएपछि, तिनीहरूलाई समतल प्लेट र oiled मा फैलाउन बारी।
स्वादिष्ट प्रस्तुत पातलो प्यानकेकहरू परिवार तालिका
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ परम्परागत घर प्यानकेकहरू खाना पकाउने मा कठिन केही छ। तालिका तिनीहरूलाई प्रस्तुत, यो पनि तातो अवस्थामा मनमोहक छ। यी उत्पादनहरु अलावा हामीले ताजा पीसा एक कप चिया, साथै कुनै पनि मिठाई फाइल सिफारिस गर्छौँ (जस्तै मह, जाम, वेज सिरप, जाम, गाढा दूध, जामुन, फल, र यति मा रूपमा।)।
तपाईं इच्छा छ भने, त्यसपछि पातलो घर प्यानकेकहरू कुनै पनि भर्ने भरिएको गर्न सकिन्छ। अक्सर यो चामल वा मीठो चीज र किसमिस संग कीमा बनाएको मासु प्रयोग गरेको छ। भरी प्यानकेकहरू, आफ्नो खाम र्याप एक greased फारममा फैलाउन र यो ओवन मा पठाउनुहोस्। यस फारममा उत्पादन भन्दा ¼ घण्टा कायम छ (200 डिग्री मा), र त्यसपछि चिया वा अन्य पेय साथ सँगै तालिका बाहिर लिएको र खुवाउनुभयो।
स्पेनी omelette: एक स्वादिष्ट नाश्ता लागि व्यञ्जनहरु
वीनर schnitzel। पकाउने विकल्पहरू
सबै अवसरका लागि शैवाल लागि व्यञ्जनहरु
Spitz: सैलुन र सौंदर्य
को बन्दागोभी बिना स्वादिष्ट सूप खाना पकाउने
सानो दैनिक कारोबार - छ ... कला। 26 नागरिक कोड को। लेनदेन गर्न
LLC को लागि व्यवसाय विकास को लागी ऋण: दस्तावेजहरुको एक प्याकेज। साना र मध्यम आकारको व्यवसायहरूमा ऋणहरू